တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ ဂပြနျနိုငျငံ၊ အထကျလှတျတျောအမတျနှငျ့ ညှနျ့ပေါငျးအစိုးရအဖှဲ့မှ Komeito ပါတီဥက်ကဋ်ဌနှငျ့အဖှဲ့အား လကျခံတှဆေုံ့ » ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ ဂပြနျနိုငျငံ၊ အထကျ လှတျတျော အမတျနှငျ့ ညှနျ့ပေါငျးအစိုးရအဖှဲ့မှ Komeito ပါတီဥက်ကဋ်ဌ Mr. YAMAGUCHI Natsuo အား ယနေ့ မှနျးလှဲပိုငျးတှငျ ရနျကုနျမွို့ရှိ ဇယြောသီရိဗိမာနျ ဧညျ့ခနျးမဆောငျ၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
အဆိုပါ တှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး မိုးမွငျ့ထှနျးနှငျ့ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား တကျရောကျကွပွီး ဂပြနျနိုငျငံ၊ အထကျ လှတျတျောအမတျနှငျ့ ညှနျ့ပေါငျးအစိုးရအဖှဲ့မှ Komeito ပါတီဥက်ကဋ်ဌနှငျ့အတူ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ဂပြနျနိုငျငံသံအမတျကွီး H.E.Mr. Ichiro MARUYAMA နှငျ့တာဝနျရှိသူမြား တကျရောကျကွသညျ။
ထိုသို့ တှဆေုံ့ရာတှငျ မွနျမာနိုငျငံအနဖွေငျ့ ရငျဆိုငျကွုံတှနေ့ရေသညျ့ နိုငျငံတကာ ဖိအားပေးမှုမြားနှငျ့ ပတျသကျ၍ ဂပြနျနိုငျငံမှ ကိုယျခငျြးစာနားလညျပွီး မွနျမာနိုငျငံအပျေါ ထောကျခံကူညီပေးလကျြရှိသညျ့ အခွအေနမြေား၊ ရခိုငျဒသေအရေးကိစ်စမြားနှငျ့ ပတျသကျ၍ လှတျလပျသောစုံစမျးစဈဆေးရေး ကျောမရှငျ၏ ဆောငျရှကျမှုမြား၊ တပျမတျောက ပူးပေါငျးကူညီဆောငျရှကျမှုမြား၊ ဖွဈစဉျဖွဈရပျမြားအပျေါ စဈဘကျဥပဒေ နညျးလမျးအတိုငျး တပျမတျောမှ စုံစမျးစဈဆေးရေးခုံရုံး ဖှဲ့စညျးဆောငျရှကျလကျြရှိပွီး ဖွဈစဉျအမှနျအတိုငျး ဖျောထုတျအရေးယူမှုမြား ဆောငျရှကျလကျြရှိသညျ့အခွအေနမြေား၊ တပျမတျောအနဖွေငျ့ နိုငျငံတျော၏ အခြုပျအခွာအာဏာနှငျ့ ပွညျသူလူထု၏ အသကျအိုးအိမျစညျးစိမျကို ကာကှယျရနျ အပွညျ့အဝတာဝနျရှိပွီး ယငျးသို့ကာကှယျရေးတာဝနျ ထမျးဆောငျစဉျ ဖွဈပှားခဲ့သညျ့ အခွအေနမြေားကိုလညျး ထညျ့သှငျးစဉျးစားရနျ လိုအပျသညျ့အခွအေနမြေား၊ တပျမတျောအနဖွေငျ့ ငွိမျးခမျြးရေးနှငျ့ နိုငျငံရေးစနဈတညျငွိမျရေးအတှကျ အဓိကထား၍ ငွိမျးခမျြးရေး အကောငျအထညျဖျောဆောငျရှကျနသေညျ့ အခွအေနမြေား၊ IDP Camp မြားရှိ နရေပျစှနျ့ခှာသူမြားအား မူလနရောပွနျလညျနထေိုငျနိုငျရေး ဂပြနျနိုငျငံမှ ထောကျပံ့ကူညီပေးလကျြရှိသညျ့ အခွအေနမြေား၊ ပွညျနယျမြား၏ နယျစှနျနယျဖြားမြားရှိ ပွညျသူတို့၏ လူမှုဘဝတိုးတကျရေးအတှကျ ကူညီဆောငျရှကျ ပေးနိုငျမညျ့ အခွအေနမြေားအား ခငျမငျရငျးနှီးစှာ ဆှေးနှေးကွသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲအပွီးတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ ဂပြနျနိုငျငံ၊ အထကျလှတျတျောအမတျနှငျ့ ညှနျ့ပေါငျးအစိုးရအဖှဲ့မှ Komeito ပါတီဥက်ကဋ်ဌတို့သညျ အမှတျတရလကျဆောငျပစ်စညျးမြား အပွနျအလှနျ ပေးအပျခဲ့ကွပွီး တကျရောကျလာ ကွသူမြားနှငျ့အတူ စုပေါငျးဓာတျပုံရိုကျခဲ့ကွသညျ။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ အထက် လွှတ်တော် အမတ်နှင့် ညွန့်ပေါင်းအစိုးရအဖွဲ့မှ Komeito ပါတီဥက္ကဋ္ဌ Mr. YAMAGUCHI Natsuo အား ယနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဇေယျာသီရိဗိမာန် ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
အဆိုပါ တွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မိုးမြင့်ထွန်းနှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး ဂျပန်နိုင်ငံ၊ အထက် လွှတ်တော်အမတ်နှင့် ညွန့်ပေါင်းအစိုးရအဖွဲ့မှ Komeito ပါတီဥက္ကဋ္ဌနှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E.Mr. Ichiro MARUYAMA နှင့်တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့ တွေ့ဆုံရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသည့် နိုင်ငံတကာ ဖိအားပေးမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ဂျပန်နိုင်ငံမှ ကိုယ်ချင်းစာနားလည်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ထောက်ခံကူညီပေးလျက်ရှိသည့် အခြေအနေများ၊ ရခိုင်ဒေသအရေးကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍ လွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်၏ ဆောင်ရွက်မှုများ၊ တပ်မတော်က ပူးပေါင်းကူညီဆောင်ရွက်မှုများ၊ ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပ်များအပေါ် စစ်ဘက်ဥပဒေ နည်းလမ်းအတိုင်း တပ်မတော်မှ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးခုံရုံး ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ဖြစ်စဉ်အမှန်အတိုင်း ဖော်ထုတ်အရေးယူမှုများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်အခြေအနေများ၊ တပ်မတော်အနေဖြင့် နိုင်ငံတော်၏ အချုပ်အခြာအာဏာနှင့် ပြည်သူလူထု၏ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကို ကာကွယ်ရန် အပြည့်အဝတာဝန်ရှိပြီး ယင်းသို့ကာကွယ်ရေးတာဝန် ထမ်းဆောင်စဉ် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အခြေအနေများကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်သည့်အခြေအနေများ၊ တပ်မတော်အနေဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် နိုင်ငံရေးစနစ်တည်ငြိမ်ရေးအတွက် အဓိကထား၍ ငြိမ်းချမ်းရေး အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေသည့် အခြေအနေများ၊ IDP Camp များရှိ နေရပ်စွန့်ခွာသူများအား မူလနေရာပြန်လည်နေထိုင်နိုင်ရေး ဂျပန်နိုင်ငံမှ ထောက်ပံ့ကူညီပေးလျက်ရှိသည့် အခြေအနေများ၊ ပြည်နယ်များ၏ နယ်စွန်နယ်ဖျားများရှိ ပြည်သူတို့၏ လူမှုဘဝတိုးတက်ရေးအတွက် ကူညီဆောင်ရွက် ပေးနိုင်မည့် အခြေအနေများအား ခင်မင်ရင်းနှီးစွာ ဆွေးနွေးကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ အထက်လွှတ်တော်အမတ်နှင့် ညွန့်ပေါင်းအစိုးရအဖွဲ့မှ Komeito ပါတီဥက္ကဋ္ဌတို့သည် အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းများ အပြန်အလှန် ပေးအပ်ခဲ့ကြပြီး တက်ရောက်လာ ကြသူများနှင့်အတူ စုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြသည်။